पल प्रकारण: पीडितले बयान फेरिन्, मुद्धामा कस्तो असर पर्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
पल प्रकारण: पीडितले बयान फेरिन्, मुद्धामा कस्तो असर पर्छ ?
मुद्धामा कस्तो असर पर्छ
पीडित भनिएकी बालिकाले नै बयान फेरेपछि शाहलाई राहत पुग्ने भएको छ । पीडित पक्षले बयान फेरेसँगै मुद्दा कमजोर हुने छ । पीडितले नै आफूमाथि बलात्कार भएको होइन भनेर बयान दिएको खण्डमा भने पीडक भनिएको पक्षलाई राहत पुग्ने छ भने यसरी बयान फेर्दा पीडितमाथि नै गलत आरोप लगाएकोमा कारबाही हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
केही साता अघिमात्र जिल्ला अदालत अछामले बलात्कारकै मुद्दामा पीडक भनिएका व्यक्तिलाई सफाइ दिँदै पीडित युवतीलाई साढे तीन वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ ।